भीम रावलले भर्खरै गरे ड'रलाग्दो निर्णय, एमालेमा खैलाबैला !
काठमाडौं – नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलल नयाँ घोषणा गरेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग झोँक्किदै नयाँ घोषणा गरेका हुन् । १९ मिनेटको अन्तरमा सामाजिक संजालमा दुई वटा ट्वीट गर्दै उनले ओली प्रवृत्तिको आलोचना गरेका हुन्।
गोप्य स्थलमा बसेर केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्नु उपयुक्त नभएको उनको निष्कर्ष छ । उनी अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनका लागि हिजोदेखि नै प्रचारप्रसारमा थिए। तर ओली भने खल्तीबाट नाम तयार गरेर कार्यसमिति तयार गर्न लागिपरेका छन । ओली प्रवृत्तिको खुलेर विरोध गर्ने उनी एक्ला हुन्। केपी ओली प्रवृतिका कारण रावलले पार्टी छोडे एमाले फेरी पनि ध्वस्त हुनेछ।
यस्तै, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षका उम्मेदवारी दिएका भीम रावललाई नयाँ प्रस्ताव गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरुको सूची तयार पार्ने जिम्मा पाएका चार नेताको सल्लाह अनुसार ओली रावललाई नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन् ।